Fiatoan’ireo Mpitsoa-ponenana Tao Amin’ny Fiantsonan’ny Fiarandalambin’ny Fanantenana Ao Vienne. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2015 2:07 GMT
Sary an'i Arzu Geybulla.
Wien Hauptbahnhof, fiantsonan-dalamby foibe ao Vienne. Volana Septambra, roa volana talohan'ny hahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana maro nandositra mba ho any Beirota sy Parisy.
Nisy andro vitsivitsy somary nilamindamina, indrindra hatramin'ny nahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana maherin'ny 5.000 ny 14 Septambra.
“Tsy misy dikany izao raha oharina amin'izay nahazo anay andro vitsivitsy lasa izay,” hoy ny mpilatsaka antsitra-po iray antsoina hoe George, tamiko. “Feno tranolay teny rehetra teny! Tsy nisy toerana azo nodiavina. Fahitàna tena henjana be tokoa,” hoy ny mpilatsaka antsitra-po iray hafa.
Manambara ny isa ara-keviny an'ireo mpitsoa-ponenana izay tonga isan'andro, nanomboka ny 1 Septambra, ny lisitra mifantsika amin'ny rindrin'ny birao vonjimaika nampiasain'ireo mpilatsaka antsitra-po. Nanomboka tamin'ny isa 1.000 izany ary nipàka hatrany amin'ny 5.000 mahery.
Ny harivan'iny, angamba olona zato teo onja no hitako teo amin'ny fiantsonana, miaraka amin'ireo mpilatsaka antsitra-po. Nangingina teo: nahazo ny anjara sakafony ireo olona raha toa kosa ireo ankizy nilalao teny amin'ny manodidina niaraka tamin'ireo kilalao natao fanomezana. Eo ampiandrasana ny fiarandalamby manaraka ireo mpitsoa-ponenana sasany, ny sasany manantena mafy fa mbola hahita – na mbola afaka hividy – tapakila rehefa tonga ny fotoana.
Akaton'ny mpiasan'ny gara tsy ho an'ireo mpitsoa-ponenana ny trano malalaka isaky ny amin'ny 10ora alina. Ireo izay nahazo tapakila ho an'ny fiarandalamby voalohany ho any Alemàina amin'ny 6ora maraina irery ihany no afaka matory eo amin'ny fiantsonana. Ireo hafa kosa mandeha mamonjy fialofana eny amin'ireo toerana akaikikaiky.
Iray amin'ireny fialofana ireny no tena mbola vaovao, tangoron-trano vitsy monja avy eo amin'ny fiantsonan-dalamby. Fitaovana nomen'ny banky iray teo an-toerana io, izay nanome ny rihana ambany manontolo mba hampiasaina ho fialofana. Misy trano fivoahana sy fandroana vonjimaika eo ivelan'ny varavaram-be fidirana. “Mila ny fahazoan-dàlana avy amin'ny departemantam-pifandraisan'ny banky ianareo”, hoy izy ireo niteny ampitiavana tamiko teo ambaravarana, raha nanandrana hiditra haka sary aho. Mba tsy ho tototra be loatra, olona voafetra ihany no noraisin'ilay toerana fialofana. Saingy mbola misy ireo toerana hafa azo aleha, ary amin'ireo tranga sasantsasany, manasa ireo mpitsoa-ponenana mba handany ny aliny indray mandeha na roa ao an-tranony ireo fianakaviana tao an-toerana.
Ireo Tiorka mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny fiantsonan-dalamby foibe ao Vienne. SARY: Arzu Geybulla.
Tsy voalamina io ny andro voalohany nitobahan'ireo mpitsoa-ponenana tao amin'ny firenena. Ny tena izy, voatsikera mafy vokatry ny fomba mahatsiravina nandraisany ireo mpitsoa-ponenana tany amin'ny faritry ny sisintany ny Aotrisiana, tao anatin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times.
Vondrona iray no tena nanapa-kevitra handray an-tànana ny raharaha. Antsoin'izy tenany hoe “Fiaradalambin'ny Fanantenana” (#TrainOfHope), miasa mifandimby ao amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby foibe ireo andiana mpilatsaka an-tsitrapo anjatony ireo. Matetika mihoatra ny 48ora ireo fifandimbiasana ireo.
“Ataonay izay hahazoana antoka fa ho tafakatra ao anatin'ny fiarandalamby tokony ho azy ny olona rehefa tonga izany. Manampy ireo mpitsoa-ponenana ihany koa izahay amin'ny fiakaran'izy ireo anaty fiara fitaterana mitondra azy any amin'ireo fonenana vonjimaika,” hoy i George manazava.
Ataon'izy ireo ihany koa izay hitokisan'ireo mpitsoa-ponenana ireo mpilatsaka an-tsitrapo, indrindra indrindra mandritra ny dia lavitra sy henjana ataon'izy ireny. Tsy salama ireo olona rehefa tonga, maratra, reraka, noho izany miezaka manome ny tsara avy amin'izy ireo ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fandraisana sady manome azy ireo izay fanampiana ilainy.
Saingy eo amin'ny gara, tsy resaka tanora mpilatsaka an-tsitr-po manampy ireo mpitsoa-ponenana fotsiny. Misy birao mikasika ny fanampiana ara-dalàna, ahitàna ireo mpisolovava manome torohevitra mikasika ny dingana arahana momba ny fialokalofana sy ny dingana manaraka; ny toeram-pitsaboana vonjimaika ahitana ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy; ny talantàlana misy sakafo izay anateran'ireo mponina eo an-toerana ny sakafo, voankazo ary tsakitsaky; ny toerana ho an'ireo ankizikely, ny birao natokana ho an'ireo olona tsy hita; ary ireo tranolay natsangana tao ivelan'ny gara ahitana ireo fitaovam-pitsaboana, sakafo ary fitafiana. Misy ekipanà media sosialy koa, mitantana ny pejy Facebook-n'ny “Train Of Hope” ho hifanaraka ny zava-misy, ahitana ny vaovao sady mamela ny olona hahalala momba izay ilain'ny ao amin'ilay fiantsonan'ny fiarandalamby.
Famahanana ireo finday tao amin'ny fiantsonan-dalamby foiben'i Viena. SARY: Arzu Geybulla.
Nifanena tamina fianakaviana Kiorda tanora iray aho raha nandalo teny amin'ny fiantsonana. Tsy niala teny amin'ilay zazalahy kely ny masoko, izay eo am-pilalaovana penina maro loko isankarazany sy ireo kilalao nomen'ny reniny azy. Ngeza sady mitsiky ireo masony. Nanantona azy aho no sady niarahaba ny reniny. An-dàlana ho any Suède ry zareo, hoy izy. Ny vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy dia samy manantena hihaona amin'ireo fianakaviana miandry azy ireo any. Nanantona anay ilay rangahy, nandray an'ilay zazakely Ruzgar teny amin-dreniny sady nilalao azy, mba ho afaka niresaka taminay ny vadiny. Tsy miteny Anglisy izy, saingy noho ny fanampian'ireo mpitsoa-ponenana hafa sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo mpandika teny, afaka nanambara tamiko ny tantaran-dry zareo izy.
Nanomboka tany Kamishli any Syria avaratra atsinanana ny dian'izay ireo, izay nandaozan'ny efatra tamin'izy ireo, lasa any Torkia iray volana talohan'izao. Namakivaky an-tongotra ny sisintanin'i Syria-Tiorkia aloha izy ireo, nandoa vola 200 euros isan'olona. Iray andro no lanin'izy ireo niampitàna ny sisintany, ary andro iray hafa nandehanana nianavaratra namakivaky an'i Tiorkia ho any Izmir. Niandry nandritra ny roa herinandro tao Izmir ry zareo talohan'ny nahazoan'izy ireo toerana amin'ny sambo ho any Gresy. Tamin'io dia nila nandoa vola be ry zareo: 200 Dolara amerikàna ny saran-dàlana ho an'ny zaza iray mankany Gresy ary hatramin'ny 3.000 Dolara ho an'ny lehibe.
Niandry sivy andro tao Gresy izy ireo. “Tena sarotra tao,” hoy izy tamiko. “Tsy maintsy nipetraka teny an-dàlambe izahay, tsy nisy sakafo na fialofana. Nangatsiaka sady natahotra ireo ankizy. Tena sarotra be.” Avy ao Gresy, afaka nankany Makedonia ry zareo, avy eo Serbia, avy eo Hongria, ary farany tao Aotrisy. Monina ao Soeda ny rahalahim-badiny sy ny anabaviny, izay kasain'ny fianakaviana hivantànana amin'ny famakivakiana an'i Alemà.
Nanana fanantenana izy ireo.
Hatramin'ny nihaonako tamin-dry zareo ireo, nieritreritra io fianakaviana io aho. Tonga any Soeda ve izy ireo? Voasakana tao Alemàina ve izy ireo? Te hanantena aho hoe vitan'izy ireo ilay izy, ary raha toa tsy izany, mba hifanena tsy ho ela amin'ny fianakaviany any Soeda izy ireo.
Ndeha hiverina ao amin'ny gara, somary nilamina kely ny zavatra rehetra. Mamafa ny gorodona, manadio ny lakozia vonjimaika sady mandamina ireo sakafo ny mpilatsaka an-tsitrapo. Ny tena zava-dehibe indrindra, noho ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ny asa tsy nampino nataon'izy ireo, nisy rivotry ny fanantenana teny ho eny.
Jereo ao amin'ny YouTube ity lahatsoratra ity amin'ny endriny lahatsary.
Latabatra fikarakarana sakafo niandraiketan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny fiantsonan-dalamby foiben'i Vienne. SARY: Arzu Geybulla.